पण्डित आचार्यलाई कसले हान्यो गोली ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»पण्डित आचार्यलाई कसले हान्यो गोली ?
पण्डित आचार्यलाई कसले हान्यो गोली ?
By सन्दीप खत्री on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०४:५६ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, २६ चैत्र: विराटनगर–१४, जतुवास्थित राजमजानकी मन्दिरमा सप्ताह श्रीमद्भागवत पुराण वाचन गर्न आएका पण्डित आचार्य श्रीनिवास गोली प्रहारबाट घाइते भएका छन्। मन्दिरमा नै बसेका उनलाई शौचालय गएका बेला शनिवार राति २ बजे गोली हानिएको थियो।
आइतबारबाट पुराण वाचन सुरु गनर्गे कार्यक्रम थियो। तर, शनिबार राति नै पण्डित आचार्यमाथि गोली प्रहार भएपछि पुराण वाचन रोकिएको छ। २६ वर्षीय आचार्यको दायाँ छातीको कुममुनिबाट गोली पार भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनको विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। छातीमा रहेका दुई गोली आइतबार नै अप्रेसन गरी निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ। उनी खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको भनाइ छ।
राति एक्कासि आएर गोली प्रहार गर्न सम्भव नभएकाले ढुकेर बसेर गोली प्रहार गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी रुण विसीले गोली प्रहार रहस्यमय भएको बताए।
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पण्डित श्रीनिवासले होसमा आएपछि आफूलाई दुईजनाले तीन गोली हानेको बताएका छन्।
प्रहरीले आइतबार विराटनगरको जतुवाबाट राजनकुमार यादव र विनोद दासलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिररहेको जनाएको छ। गोली प्रहारको जिम्मा कुनै पनि संगठनले लिएको छैन।
प्रहरीले घटनास्थलमा हस्तलिखित पर्चा भेट्टाएको छ। पर्चामा पण्डित आचार्यले हिन्दूराज्य र राजसंस्था माग गरेको र अन्य धर्मावलम्बीलाई अवहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ। -नयाँ पत्रिकाबाट